အနံ့နံပျံ့, နှိုးစက်နာရီအနံ့ပျံ့, Young ကရှင်သန်နေသောရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:အနံ့နံပျံ့,နှိုးစက်နာရီအနံ့ပျံ့,လူငယ်တို့နေထိုင်မှုရေနံပျံ့,နှိုးစက်နာရီပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > နှိုးစက်နာရီပျံ့
နှိုးစက်နာရီပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အနံ့နံပျံ့, နှိုးစက်နာရီအနံ့ပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လူငယ်တို့နေထိုင်မှုရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အဆင့်မြှင့်ထားသော Version Ultrasonic Humidifier နှင့် Alarm Clock နာရီ
ပရီမီယံအရည်အသွေး PP Materals ရေနံပျံ့နှိုးစက်နာရီ
နှိုးစက်နာရီနှင့်အတူ ROOM တွင်လျှပ်စစ်ရေနံပျံ့
နှိုးစက်နာရီနှင့်အတူသစ်သားနာရီဒီဇိုင်း Air ကို Humidifier
နှိုးစက်နာရီအနံ့နံပျံ့ Living ဟိုတယ် Young က
ROOM တွင် Air ကိုရနံ့အနံ့ရေမှုံရေမွှားနှိုးစက်နာရီပျံ့
သစ်သားအစေ့နှိုးစက်နာရီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ Waterless Auto Shut-Off လုပ်ဆောင်ချက် - ၄၀၀ မီလီမီတာရှိသောရေတိုင်ကီအတွင်းရှိဒီနှိုးစက်နာရီပျံ့နှံ့ခြင်း။ ရေမရှိသောအလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းစနစ်ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဤသစ်သားပျံ့နှံ့ မှုသည်သင်၏လုံခြုံရေးအတွက်ရေကုန်သောအခါအလိုအလျောက် ပိတ်လိမ့်မည် ။ Colorful LED Light:...
အဆင့်မြှင့်ထားသော Version Ultrasonic Humidifier နှင့် Alarm Clock နာရီ ခြောက်သွေ့သောဆောင်းရာသီတွင်လေဆာရောင်ခြည်သုံးစိုထိုင်းဆ၊ စိုပြေသောရေသန့်ဘူး ၄၀၀ မီလီမီတာ၊ လေအေးပေးစက် ၁၄ လုံးနှင့်အလင်းရောင် ၁၅ ခု၊ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အသုံးပြုသောအခါအနံ့အရသာ ၅ မျိုးခွဲ -...
နှိုးစက်နာရီဒီဇိုင်းနှင့်အတူအနံ့ပျံ့ ကြောင့်ဗဟိုမှအိပ်မပျော်စိုးရိမ်စိတ်ခြောက်သွေ့မျက်စိခြောက်သွေ့ချောင်းဆိုးသက်သာရာ, ခေါင်းမာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနံ့ဖုံးကွယ်ထားကြောင်းဘို့ပြီးပြည့်စုံသော, လေထု humidify နှင့် refresh မှ Ultra-ဒဏ်ငွေမြူခိုးသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ Ionize, Ultrasonic ပျံ့...
ပရီမီယံအရည်အသွေး PP Materals ရေနံပျံ့နှိုးစက်နာရီ အဆိုပါနှိုးစက်နာရီပျံ့စင်ကြယ်သောရနံ့ကုထုံနှင့်အတူနူးညံ့သိမ်မွေ့သည့်သဘာဝအလင်းကုထုံးပေါင်းစပ်တဲ့ရာဘေးနှိုးစက်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသဘာဝကျကျအိပ်ပျော်ခြင်းမှပယ်ရှေ့မြောကကူညီမယ့်တဖြည်းဖြည်းနေဝင်ချိန် Set, ထို့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ပနေထွက်သင်ညင်ညင်သာသာနိုးရန်။...
နှိုးစက်နာရီနှင့်အတူ ROOM တွင်လျှပ်စစ်ရေနံပျံ့ ထောက်လှမ်းရေးဒီဇိုင်းနှိုးစက်နာရီပျံ့အတူလေကြောင်းကတဆင့်လူစုခွဲလှပသောအနံ့၏ရနံ့မှနိုးထ! တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဒီဇိုင်း, ဤလှပသောသစ်သားစပါးကိုဒီဇိုင်းမဆိုအိပ်ခန်းထဲမှာစိတ်ကူးကြည့်ရှုသည်။ ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော, ဒီက high-performance...
နှိုးစက်နာရီနှင့်အတူသစ်သားနာရီဒီဇိုင်း Air ကို Humidifier နှိုးစက်နာရီပျံ့သင်ဝိုင်နှင့်လန်းဆန်းခံစားသောနေ့ရက်ကာလကိုစတင်ပြီးအောင်သေချာစေရန်စုံလင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Dituo LED မီးအလင်းရောင်, နှိုးစက်နာရီ, တိတ်ဆိတ်စစ်ဆင်ရေးသို့မဟုတ်လှငျအော်တိုပိတ်-ချွတ်,...
နှိုးစက်နာရီအနံ့နံပျံ့ Living ဟိုတယ် Young က sooth LED မီးထွန်း: မှတဆင့်စက်လီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်တဦးတည်းအရောင်မှမသတ်မှတ်နိုင်7အရောင်များအကြားကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်မှေးကွိုညဥ့် get ကူညီပေးမည့် nightlight အဖြစ်သင့် child`s အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ultrasonic ပျံ့ထားပါ။ AUTO ပိတ်ထား:...
ROOM တွင် Air ကိုရနံ့အနံ့ရေမှုံရေမွှားနှိုးစက်နာရီပျံ့ လှငျအော်တို-OFF ရာထူးအမည်: ဒီ Ultrasonic ပျံ့ 400ml တစ်ရေတိုင်ကီစွမ်းရည်နှင့်အတူ6-8 နာရီကြာကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ ရေသည်သင်၏လုံခြုံရေးအတွက်ထွက်ပြေးလာသောအခါလှငျ Auto-ချွတ် function ကိုနှင့်အတူဒီဇိုင်း, ဒီ Wood ကကောက်ပဲသီးနှံပျံ့ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ 7...
တရုတ်နိုင်ငံ နှိုးစက်နာရီပျံ့ ပေးသွင်း
လူငယ်တို့ LivingAlarm နာရီရေနံအနံ့ပျံ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
နှိုးစက်နာရီနှင့်အတူအနံ့နံပျံ့အနှစ်သာရသန့်စင်သောမရှိမဖြစ်ဆီအတွက် vaporise ရန်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ micro-ဒဏ်ငွေအေးမြသောအခိုးအငွေ့ရှူသွင်းမိသည့်အခါရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နိုင်ရန်မိမိတို့၏စင်ပုံစံအတွက်လေထုထဲသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအမှုန်လူစုခွဲပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းနောက်ဆုံးပေါ် Ultra-Sonic လှိုင်းနည်းပညာကိုငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦး humidifier အဖြစ်မလိုချင်တဲ့ပိုးမွှားများနှင့်ပြုမူသောအမှုလေထုသန့်စင်။
နှိုးစက်နာရီ setting ကိုအတူနှိုးစက်နာရီအနံ့ပျံ့
LED ကိုအချိန် display နဲ့အတူနှိုးစက်နာရီပျံ့
လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုအတွက် Touch ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူငယ်ရွယ်နေထိုင်မှုရေနံပျံ့
7 အရောင်များ featuring LED မီးအလင်းရောင်အတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူအနံ့ပျံ့